मूल्यवृद्धि सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर ! « KBC khabar
मूल्यवृद्धि सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर !
२९ पुष २०७८, बिहीबार २१:४०
काठमाडौं, २९ पुस । मुलुकको मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा मूल्य वृद्धि सात प्रतिशत नाघेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा दुई दशलमव ९३ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि बढेर सात प्रतिशत नाघेको हो ।